Gabrummaa mataatti baatanii alagaaf daboo lolaa dhaabachuun fafa! – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooGabrummaa mataatti baatanii alagaaf daboo lolaa dhaabachuun fafa!
Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo, Adoolessa 17, 2021
Akkuma olitti tuquuf yaalle, lolli Impaayerri Itoophiyaa baroota darban yeroo adda addaatti geggeessaa turte hedduunsaa kan Oromoo hin ilaallanne ta’us, ilmaan Oromoo dirqamaniis ta’u fedhii isaaniitiin lolicha irraa qooda fudhatanii wareegama hin barbaachifne kaffalaniiru. Qaama Oromoo gabroomsee Oromiyaa dhuunfate waliin hiriiranii lolaa turuun ilmaan Oromoo seenaa keessatti seenaa gurraacha baay’ee nama jibbisiisudha. Akka fakkeenyaatti kaasuudhaaf, yeroo Minilik Oromootti duulee Oromoo cabsu ilmaan Oromoo kanneen akka Goobanaa Daacceefaa Minilik waliin ta’uun Oromoo cabsanii gabrummaa jalatti kuffiisan. Yeroo Hayile Sillaaseen Oromootti duulee waraana Waaqoo Guutuufaa rukkutu ilmaan Oromoo kanneen akka Jaagamaa Keelloofaa Hayile Sillaasee tumsanii waraana Waaqoo rukkutaniiru. Amma seenaa kana irra deebi’uudhaan ilmaan Oromoo leellistoota sirna mootota darbanii waliin ta’uudhaan lola biyyattii keessatti geggeeffamaa jirurraa wayita qooda fudhatan argama kun immoo seenaa darbe barachuu dadhabuu fi ergamtuu Abbaa Irree tahanii tajaajiluudha.
Dhumarratti, rakkoo siyaasaa biyya kanaa furuudhaaf qaamni dhimmi ilaalu akka fala kaa’u yaadamee, yaadonni furmaataa yeroo adda addaatti dhiyaataa turanis qaama biyyan bulcha ofiin jedhuun fudhatama waan dhabeef, rakkoon nageenyaafi goolamni siyaasaa kun akkuma Tigiraayitti mudate Oromiyaatti mudatee nagaa sabootaa akka hin jeeqneef Addi Bilisummaa Oromoo lammiilee Oromiyaatiif Mootummaa Ce’umsaa Biyyoolessa Naannoo Oromiyaa ijaaruun dirqama akka ta’e amanee labsuun ni yaadatama. KFOnis yaada kana fudhatee deeggarsa kennuun beekamaadha.
Kanaafuu, lammiileen Oromiyaa nagaa kan argatan yoo mootummaa mataa isaanii ijaarratan waan ta’eef, lammiileen Oromiyaa caasaa bulchiinsa MCBNO’tti makamanii akka hojjetan waamicha keenya taasifna.
Kabaja Guyyaa Fincila Diddaa Gabrummaa (FDG), Washington, DC - Sadaasa 17, 2018
Wamicha Guyyaa Yaadannoo Fincila Diddaa Gabrummaa Waggaa 13ffaa, Sanbata/Saturday, Sadaasa/Nov. 17, 2018. Konyaa ABO Washington,…